လတ်တလောဖတ်နေတဲ့စာအုပ်တွေ | Ma Shwe Mi
October 23, 2009 at 3:48 pm3comments	ဒီနေ့ပဲ ရန်ကုန်ကစာအုပ်တွေရောက်လာတယ်။ အရင်လရန်ကုန်ပြန်တုန်းက၀ယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကို ကီလိုပိုနေတာနဲ့မသယ်ခဲ့နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ စာတိုက်ကနေပဲလှမ်းပို့ပေးတယ်။ တနေ့က ၂ထုပ်ရောက်တယ်။ ဒီနေ့ တစ်ထုပ်ရောက်တယ်။
ရန်ကုန်မှာတုန်းကဖတ်ခဲ့ပေမယ့် ပြန်ဖတ်တော့လဲဖတ်လို့ကောင်းနေတုန်းပဲ။ ရုပ်ရှင်လဲဝါသနာမပါ၊ဂိမ်းလဲမဆော့၊အပြင်ထွက်ရတာလဲသိပ်မကြိုက်တဲ့မရွှေမိအတွက်တော့ စာအုပ်တွေကအကောင်းဆုံးအဖော်၊တန်ဖိုးအရှိဆုံးရတနာတွေလို့ သာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တင်စားလိုက်ချင်ပါ့။ စာအုပ်ဆိုတာလဲ အီးဘွတ်ခ်တွေကိုမကြိုက်ပြန်ဘူး။ ကွန်ပျုတာကြာကြာကြည့်ရင် မျက်စိကိုက်တတ်လို့။
တကယ်တော့ အိပ်ယာပေါ်မှာလှဲအိပ်ပီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဇိမ်လေးနဲ့ဖတ်နေရတဲ့အရသာနဲ့ ကွန်ပျုတာပေါ်မှာဖတ်ရတဲ့ အရသာ တခြားစီပဲ။ ဒီတော့ကာ ပိုက်ဆံကုန်တာပေါ့ရှင်။ စာအုပ်တွေကလဲတဖြည်းဖြည်းဈေးကြီးလာတယ်။
ရွှေဥဒေါင်းရဲ့ စုံထောက်ဦးစံရှား ၂အုပ်တွဲ အသစ်ပြန်ထွက်တာ ဆို ၂အုပ်ကို တသောင်းခွဲ။ ဒါပေမယ့် တန်ပါတယ်လေ။ အထူကြီး။ ဖတ်လို့လဲ မရိုးဘူး။
ဒီနေ့ ဖတ်နေတာတော့ စုံထောက်ဦးစံရှား ပေါင်းချုပ် ၁၊၂ တနေကုန်ဖတ်လိုက်တာပီးသွားပီ။ ညစာတောင်ကြာဇံချက်လေးကိုပဲဖြစ်သလိုချက်စားလိုက်ရတယ်။ ယောကျာ်းကတော့ မ၀လို့တဲ့ ဟိူုစားဒီစားပေါ့။ သူက တော့ တီဗီကြည့်တာအရမ်းဝါသနာပါတယ်။ အလုပ်ကပြန်လာတာနဲ့ တလိုင်းပီးတလိုင်းကြည့်။ မရွှေမိကတော့ စာအုပ်တွေတအုပ်ပီးတအုပ်ဖတ်။ ဟုတ်နေတာပဲ။ အကြိုက်တူရင်မှလုနေရဦးမယ်😛
နောက်ရက်တွေမှ မရွှေမိဖတ်နေတဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်းဆက်ပြောဦးမယ်နော်။ ဒီကစာအုပ်တွေအကြောင်းတော်ကီပွားရရင် မမောဘူး။
Entry filed under: စကားစမြည်, ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်း. Tags: စာအုပ်, ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်း.	မရွေမိ…ဘယ်သူလဲ	ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်း ၁၉၅၃	3 Comments Add your own
sansantin | March 25, 2010 at 2:14 pm
Lucky enough to have time to read books in abroad.
nwegalay | October 29, 2009 at 10:27 pm
ပွား ဘာ၊ ပွား ဘာ။
Peace | October 24, 2009 at 11:18 pm
Heeeee…. One day, i’ll come to ur home and borrow the detective books…………😉